आजभोली गर्भवती भएझैं महसुस भएको छ–केकी अधिकारी – YesKathmandu.com
आजभोली गर्भवती भएझैं महसुस भएको छ–केकी अधिकारी
काठमाडौं । म्युजिक भिडियो हुँदै ‘स्वर’बाट अभिनेत्रीका रुपमा डेब्यु गरेकी केकी अधिकारी ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’बाट पूर्ण निर्माताको रुपमा अगाडि आउँदैछिन्। त्यसो त ‘लभ सासा’मा पनि केकीको नाम कार्यकारी निर्माताको रुपमा उल्लेख छ तर उनले कामसहितको निर्माताको जिम्मेवारी यही फिल्ममा लिएकी हुन्। त्यसैले फिल्म रिलिजको संघारमा केकीको दौडधुप हेर्न लायक छ। फिल्मले दिएको व्यस्ततालाई हेरेर केकी आफैंले फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘यति धेरै टेन्सन छ त्यही पनि म किन बेहोस हुन्न ?’ उनले फिल्म निर्माणको अनुभवको बारेमा खुलस्त बताइन्।
के केकीलाई यतिबेला बेकारमा फिल्म बनाउन हतारिएछु भन्ने लागेको छ ?
बेकारमै फिल्म बनाउन तम्सिएँ भन्ने त लागेको छैन। संसारकै गाह्रो काममा हात हालिएछ भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर यो काम गर्न सकियो भने संसारको जुनसुकै काम पनि सजिलो हुन्छ, यसमा म पक्का भएकी छु।
के–के चिज गाह्रो हुँदोरहेछ त ?
फिल्म निर्माणकै दुइटा चरण हुन्छन्, सुटिङअघि र सुटिङपछि। सुटिङअघि आर्थिक पाटोमा हल्का टेन्सन हो, अनि अलि–अलि कास्टिङमा झन्झट हुँदोरैछ। तर सुटिङपछि चाहिँ राम्रो काम निकाल्नलाई अलि धेरै नै अप्ठेरो हुँदारहेछ। किनकि तपाईंले राम्रो आउटपुट निकाल्नलाई बेस्ट मान्छेसँग काम गर्नु प(यो र उहाँहरूको समस्या के हो भने उहाँहरूलाई कामको चाप छ। अनि जहिलै लास्ट आवरमा काम गर्नुपर्ने। जस्तो २ बजे हामीले ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने भनेका थियौं तर पत्रकार आइसके ट्रेलर स्टुडियोमा मिक्सिङ भइरहेको थियो। त्यो एक घन्टाको टेन्सन भनेको लाखौं घन्टा बराबर हुँदारहेछ।
तपाईं आफैं ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा डिग्रि होल्डर हुनुहुन्छ, पढेको काम लागेन त ?
खासै लागेन भन्नुपर्ला। सिद्धान्तको कुरा र व्यवहारको कुरा फरक परिहाल्छ नी। अझ त्यसमाथि हामी त्यति धेरै व्यवसायिक हिसाबले पनि त काम गर्दैनौं नि। म पाँच महिनादेखि यही फिल्मकै लागि खटिइरहेकी छु। अरु कुनै प्रोजेक्ट नगरी लामो समय बसेको यो पहिलो पटक हो। मलाई त गर्भवती भएझैं महसुस भएको छ। मानौं ५ महिनाको बच्चा बोकेर हिँडिरहेकी छु।
तपाईंलाई त खासमा प्रोडक्सनमा भन्दा निर्देशनमा रुचि थियो हैन ररु प्रायोरिटी कसरी परिवर्तन भयो ?
हो, मलाई निर्देशनमा पनि रुचि थियो तर निर्देशनका लागि अझै परिपक्व भइसकेकी महसुस भएन। ढिलो चाँडो निर्देशन पनि गर्छु।
फिल्मको कुरा गरौं, धेरैले केकीलाई बौद्धिक अभिनेत्रीका रुपमा चिन्छन्। तर केकीले फिल्म निर्माण गर्दा कमेडी जस्तो हल्का विषय छान्यो भनिरहेका छन्। किन यो विधामा फिल्म ?
हो मैले बलेकै आगो ताप्न खोजेकी हुँ। यसका पछाडि दुइटा कारण छन्, पहिलो त निर्माता बन्ने निर्णय गरेर म आफैंले एक खालको रिस्क लिएँ, किनकि छँदाखाँदाको अभिनय करिअर छाडेर म फिल्म बनाउन आएकी हुँ। दोस्रो नेपालको बजार यति धेरै उदार पनि छैन कि मैले कुनै प्रयोगात्मक फिल्म बनाउँ र त्यसबाट राम्रो मुनाफा आर्जन गरुँ। अर्को, फिल्म फिमेल प्रोटागोनिस्टलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको छ, यो पनि आफैंमा रिस्क हो। जब म फिल्मको कुरा लिएर वितरक तथा अन्य गएँ, सबैले फिल्ममा हिरो को छ सोध्नु भयो ? हाम्रो फिल्ममा चल्तीका हिरो छैनन्। बाहिर हेर्दा रिस्क देखिन्न, तर रिस्क नै रिस्क छ।
केकी निर्माता भएको फिल्ममा प्रियंका कार्की र ऋचा शर्माले अभिनय गरेका छन्। उही स्तरका तीन अभिनेत्रीबीच ‘इगो’को समस्या छैन ?
छैन। स्क्रिप्ट तयार नहुँदै यो रोलका लागि प्रियंका दिदीलाई भन्छु र यो रोलका लागि ऋचा दिदीलाई भन्छु भन्ने लागेको थियो। तर फिल्ममा प्रियंका दिदीको भन्दा ऋचा दिदीको भूमिका एकदमै भिन्न छ। ऋचा दिदीले चाहिँ गर्न मान्नु होला कि नहोला भन्ने लागेको थियो तर कन्भिन्स गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स थियो। हामीबीच यति सौहाद्रता त छ कि एक अर्कालाई होस्टेमा हैंसे गरौं। हामी सबैको भूमिका उत्तिकै छ, जुन कुरा ट्रेलरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। केकीले बनाएको फिल्ममा केकी ज्यादा देखिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सोचेको छैन। बरु अरुले किन तिम्रो रोल कम भनेर जिज्ञाषा राख्नु भएको छ। यो हाम्रो टिमले निर्णय गरेको कुरा हो।
ऋचाको चरित्र तिर्सना बुढोथोकीबाट प्रभावित भन्ने कुरा आएको छ ? अभिनेत्रीले बनाएको फिल्ममा अर्को कुनै महिलालाई नै उडाउनु राम्रो हो र ?
हामीले उहाँको शैलीलाई एडप्ट ग(या हौं, उहाँलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेका छैनौं। त्यो वास्तवमा एकदमै च्यालेन्जिङ चरित्र थियो, तर धन्न ऋचा दिदीले कस्ता मजाले भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । हामीले व्यक्तिगत रुपमा पनि तिर्सनाजीसँग कुरा गरिसक्यौं। भोलि फिल्म हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, हामीले उहाँलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेका छैनौं। नागरिकबाट
मिस एसिया विकिनीले यस्तो दिइन बोल्ड सिन
गायिका ज्योतिद्धारा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी
सोनमको बोल्डसिनले परिवारमा हैरानी
नायक हमाल महिलाको अवतारमा
२० वर्ष अगाडिको रेकर्ड भत्काउला त एमालेले ?
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको २७ दिनमा पूर्वराजपरिवारलाई ४ सास्ती
प्यूठानमा जिप दुर्घटना : ६ जनाको मृत्यु, तीन गम्भीर घाइते